Costa Rica: Rantin-tsary nandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Febroary 2010 19:38 GMT
Nanokana rantin-tsary [es] momba ny fifidianana notontosaina tamin'ny 7 febroary 2010 teo ka nahalany an'i Laura Chinchilla ho vehivavy voalohany ho filoha teo ny vondrona mpaka sary Kostarikana antsoina hoe “Nomada Colectivo” (Vondrona Mpivezivezy). Nanaraka ny arabe ity vondrona ity hipika ny zava-nisy nandritra ny androm-pifidianana.
Saripika avy amin'ny Vondrona Mpivezivezy ary nahazoana alalana.
Nanoratra momba ity andro ity tao anatina sombin'asa fampirantiana [es] ity i Jenny Cascante, mpikambana ao anatin'ny vondrona:
Omena fahafahana manapa-kevitra amin'izay tsara ho antsika ny olom-pirenena tsotra isaky ny efa-taona. Mandaitra tsara tahaka ny “placebo” (saina resy lahatra fa fanafody manasitrana no nohanina) ny adidy ho an'ny firenena: tsy misy tsara tahaka ny fanapahan-kevitra iraisana. Voatondro hametraka ny safidin'ny besinimaro izay tsy misolo tena antsika rehetra ny fifidianana, fa izay ahiahiana araka ny mahazatra. Manolo-tena hanoa izany fomban'ny safidy sarotra azo izany isika, eo an-kianjan'ny adihevitra, fifanandrinan'ny tsy mifidy sy ny manao araka ny mahazatra, tahaka ny lalaon'ankizy tsy maintsy andraisana anjara.
Tahaka ny pensilihazo miloko laoranjy tiantsika handokoana na aiza na aiza ny demaokrasia, saingy mandritra izany fotoana izany dia avelatsika izay tonga voalohany hanova araka izay tiany. Tratra farany amin'izay izay (natao) ho saribakoly: isika.
Sary avy amin'ny Vondrona mpivezivezy ary nahazoana alalana.